နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
Posted By: mygate wayon: ဇှနျ 03, 2019 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
ချက် ဇွန် ၂
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြသည် ဇွန် ၁ ရက် နံနက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာရာ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အား ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းနှင့် သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက သုဝဏ္ဏဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့သည် ဘန်ကောက်မြို့မှ တစ်ဆင့် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရာ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Prague မြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အား ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daroslav Dolecez နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ချက်နိုင်ငံ Prague အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့သည် ခေတ္တတည်းခိုမည့် Pragueမြို့ရှိ Lichtenstein Palace အစိုးရဧည့်ဂေဟာသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
နျိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ခကျြသမ်မတ နျိုငျငံသို့ ရောကျရှိ
ခကျြ ဇှနျ ၂
နျိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွသညျ ဇှနျ ၁ ရကျ နံနကျ ပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောမှ အထူးလယောဉျဖွငျ့ ထှကျခှာရာ ဒသေစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနဈတှငျ ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့သို့ ရောကျရှိကွသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အဖှဲ့အား ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျ ကွီး ဦးမြိုးမွငျ့သနျးနှငျ့ သံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြားက သုဝဏ်ဏဘူမိအပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျ၌ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အဖှဲ့သညျ ဘနျကောကျမွို့မှ တဈဆငျ့ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ဆကျလကျထှကျခှာခဲ့ကွရာ ဒသေစံတျောခြိနျ ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ ခကျြသမ်မတနိုငျငံ Prague မွို့သို့ ရောကျရှိကွသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အဖှဲ့အား ခကျြသမ်မတနျိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံ အမတျကွီး ဒျေါယဉျယဉျမွငျ့၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ခကျြသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Daroslav Dolecez နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက ခကျြနိုငျငံ Prague အပွညျပွညျ ဆိုငျရာလဆေိပျ၌ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အဖှဲ့သညျ ခတ်ေတတညျးခိုမညျ့ Pragueမွို့ရှိ Lichtenstein Palace အစိုးရဧညျ့ဂဟောသို့ ရောကျရှိကွသညျ။